Tahirim-bolamena nasionaly : Volamena 1,3 taonina no voangona ao amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara
Tafapetraka ny taona 2020 ny Tahirim-bolamena Nasionaly izay isan’ny fanamby lehibe napetraky ny Filoham-pirenena. Mitotaly 1 taonina sy 300 kilao ny lanjan’ny tahirim-bolamena ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Isan'ny nambaran’Andriamatoa Ravokatra Fidiniavo, Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy Loharanon-karena Stratejika ireo, nandritra ny fihaonana ampitain-davitra nitondrany ny Tatitry ny asa vitan'ny Ministera sahaniny tamin'ny taona 2020 teo anivon'ny Antenimieram-pirenena, ny Alakamisy 17 Jona 2021.
Ny Ministera dia mitarika sy mametraka ny lalan'ny volamena hahatongavan’izany ho any amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara. Ity farany kosa no miandraikitra ny fividianana ireo volamena araka izany rindran-damina izany.
Nanomboka ny 15 Desambra 2020 ny Banky Foiben’i Madagasikara no nividy volamena. Arakaraky ny vidin'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no ividianan'ny Banky Foiben’i Madagasikara ny volamena.
Raha 177 Kg no volamena voangona hatramin’ny 31 Desambra 2020, ny 08 Aprily 2021, izany hoe efa-bolana taty aoriana dia feno ny 1 taonina sy 300Kg.
Mbola hitohy ny fividianana volamena amin’ireo mpandraharaha voafantina sy mahafeno ny fepetra napetraky ny Banky Foiben’i Madagasikara.
Fanondranana volamena : Nahemotra ny fandinihana ny lalàna Mohamad Ahmad »